सरिता गिरीज्यू, राष्ट्रियता के हो ? मनिषा कोइरालासँग सिक्नुस् – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/सरिता गिरीज्यू, राष्ट्रियता के हो ? मनिषा कोइरालासँग सिक्नुस्
काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा दुई महिलाको विषयमा निकै चर्चा छ । एकजनाको संकारात्मक चर्चा छ अर्कोको नकारात्मक । ती हुन् नेपाली चेली मनिषा कोइराला र नेपाली बुहारी सरिता गिरी ।
सरिता गिरी अहिले जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद छिन् । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सरिताले प्रतिनिधिसभामा भनेकी थिइन्, नेपालले नक्सा जारी गर्नु अगाडि भारतलाई सोध्नुपर्दैन ? भारतले गत सेप्टेम्बरमा एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गर्दा र नेपालको लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक बनाउँदा उनले एक शब्द विरोध गरिनन् । तर, जब नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न खोज्यो त्यसपछि उनी विरोधमा उत्रिइन् ।
गिरी लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा छिन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यिनी श्रममन्त्रीसमेत बनेकी थिइन् । तर, बीचमै निकालिइन् । सधैं मधेसको राजनीति गर्दै आएकी सरिताले नेपाल र नेपालीको भन्दा भारत र भारतीयको वकालत गर्दै आएकी छन् । त्यसैले अहिले उनीविरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली आक्रोशित भएका छन् ।
अर्कोतर्फ मनिषा कोइराला एक ट्विटले भारतलाई नै हल्लाइदिएको छ । जसमा उनले मात्र सानो देश भए पनि आफ्नो स्वाधीनता र अस्तित्व जोगाएकोमा उनले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । त्यही विषयलाई लिएर सबै भारतीय मिडिया उनीविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
नेपालमा भने मनिषाको तारिफ र प्रशंसा भएको छ । मनिषा कुशल कलाकार हुन् यसमा कुनै शंका रहेन । तर, उनको रगतमा बीपी कोइरालाको जिन पनि छ भन्ने कुरा धेरै भारतलाई थाहा नहुन सक्छ । बीपी राष्ट्रवादी नेता हुन् । त्यसबेला दक्षिण एसियामै बीपी जतिको हाइट भएका नेता कोही थिएन ।
मनिषाको एक मात्र ट्विटले भारतको निद्रा बिथोलिन्छ भने भविष्यमा उनी राजनीतिमा आइन् भने उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुने छ ? सर्वत्र चासो छ । यद्यपि मनिषाले राष्ट्रियताको सवालमा जे अडान लिएकी छन् त्यो प्रशंसायोग्य छ ।
Deepak Raj Giri news